स्थानीय तह पुनरसंरचना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन प्रस्ताव – Enayanepal.com
स्थानीय तह पुनरसंरचना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन प्रस्ताव
चौकुने र चिङगाडलाई विशेष क्षेत्रको प्रस्ताव गर्न सकिने
यहाँको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस अघि ८ वटा स्थानीय तह रहने गरी पुनरसंरचना गरिएको सुर्खेतमा ९ वटा स्थानीय तह रहने गरी नयाँ सहमति गरिएसंगै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।
पछिल्लो पटक मापदण्ड परिवर्तन भएर आएपछि एउटा गाउँपालिका थप गरी पुनरसंरचना गरिएको हो । यसक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्ने कारण सहित प्रस्ताव गरिएको हो । जिल्लाको पुनरसंरचनाको बारेमा जानकारी दिदै यहाँका स्थानीय बिकास अधिकारी अमृत लम्सालले केही तर्क र कारणसहित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन प्रस्ताव गरिएको बताए ।
यसको जनसंख्या र वार्षिक आन्तरिक आय समेत तोकिएअनुसारको पुग्ने र प्रदेश नं. ६ को राजधानि समेत हुने पक्का भएकोले उपमहानगरपालिका बनाइनुपर्ने तर्क गरिएको छ ।
यस्तै पछिल्लो पटक थपिएको लेखबेसी गाउँपालिकालाई पनि नगरपालिका बनाउन प्रस्ताव गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी लम्सालले बताए । लेखबेसीको दुवै साइडमा नगरपालिका र बीचमा गाउँपालिका भएकोले त्यसलाई पनि नगरपालिका नै बनाउन सिफारिस गरिएको लम्सालले जानकारी दिए ।
यस्तै सुर्खेतका उत्तरपूर्वी चिङगाड र पश्चिमको चौकुने गाउँपालिकालाई विशेष क्षेत्र प्रस्ताव गरिने प्रस्ताव गर्न सकिने स्थानीय विकास अधिकारी लम्सालले बताए । यी क्षेत्रमा गरिबी भएकोले विशेष क्षेत्रका लागि प्रस्ताव हुनसक्ने उनको भनाई छ । अन्य संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रका लागि पनि वडाहरुको अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।
पुनरसंरचनाको बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा संख्या र केन्द्रको पनि टुङगो लागेको जानकारी दिइएको थियो । जसअनुसार चौकुने गाउँपालिकामा ९ वटा वडाहरु रहने र केन्द्य्र विजौरा गाविस वा गुटु गाविस हुनेछ । यस्तै पञ्चपुरी नगरपालिकाका ११ वडाहरु र केन्द्र बाबियाचौर गाविसकको ५ वा ६ नं. वडालाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वडाहरु १६ वटा हुनेछन भने केन्द्र साविककै वीरेन्द्रनगर हुनेछ । ६ वडा प्रस्ताव गरिएको चिङगाड गाउँपालिकाको केन्द्र अवलचिङ गाविसको ४ नं. वडा हुनेछ उल्लेख गरिएको छ । बराहताल गाउँपालिकामा १० वडा रहने र केन्द्र कुनाथरीको बड्डीचौर वा लेखगाउँको ओदाल ताल रहनेछ, यस्तै लेकबेसीका १० वडा र अहिलेको वडा नं. ६ कल्याणमा केन्द्र हुनेछ ।
भेरीगंगा नगरपालिकाका १३ वडा र केन्द्र राताचौरलाई प्रस्ताव गरिएको छ भने गुर्भाकोट नगरपालिकामा १४ वडा र साविकको दहचौर र बोटेचौरलाई केन्द्र प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सिम्ता गाउँपालिकामा ९ वडा हुनेछन भने केन्द्रका लागि बजेडिचौरका आली, पातिहाल्ना र राकमको जामुनेलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।